ASUS ZenBook फ्लिप एस, चरम पातलोपन संग एक परिवर्तनीय | ग्याजेट समाचार
ASUS ZenBook फ्लिप एस, चरम पातलोपनको साथ एक परिवर्तनीय
ताइवान एएसयूएसले प्रस्तुत गरेको हो कि यसको सबैभन्दा पातलो ल्यापटप के हो। यो पनि रूपान्तरण भन्न सकिन्छ, किनकि पछि ASUS ZenBook फ्लिप एसको पर्दा पूर्ण रूपमा फोल्ड गर्न सकिन्छ र एक सम्पूर्ण बन्न ट्याब्लेट। थप रूपमा, यससँग आरामदायक कुञ्जीपाटी र एक एल्युमिनियम डिजाइन छ जुन यसलाई त्यो छुन्छ प्रिमियम धेरै प्रयोगकर्ताहरूले खोज्दछन्।
ASUS ZenBook फ्लिप S एक ल्यापटप हो जुन यसको सौंदर्यशास्त्रको लागि ध्यान आकर्षणको साथसाथै यसको प्राविधिक विशेषताहरूको लागि पनि ध्यान आकर्षित गर्दछ। पहिलो कुरा जुन हामी तपाईंलाई बताउँछौं त्यो हो तपाईंको स्क्रिन १.13,3..XNUMX इन्च विकर्ण हो र LEDs द्वारा ब्याकलिट हो। त्यस्तै, प्यानलले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकतम रिजोलुसन 4K UHD हो (3.840० x २,१2.160० पिक्सेल), एक १178 डिग्री हेर्ने कोण र H० हर्ट्ज टेक्नोलोजीको साथ।
र, र कम्तिमा पनि होइन ASUS जोर दिन्छ कि पर्दा बहु स्पर्श छ र एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया छ जब एक साथ काम गर्दा स्टाइलस, सही माइक्रोसफ्ट सरफेस शैलीमा। ताइवानी उनको एक क्रेडिट भनिन्छ क्रेडिट मा छ ASUS कलम योसँग १०1024२ स्तरहरू छन् र तपाईंलाई तपाइँको कलात्मक नस बाहिर निकाल्न अनुमति दिन्छ।
किबोर्ड र टचपाड तिनीहरूको पनि छुट्टै उल्लेख छ। पहिलोसँग एक छ राम्रोसँग स्पेस भएको कुञ्जीहरूको साथ आरामदायक chiclet किबोर्ड। र, सबै भन्दा राम्रो: तिनीहरू ब्याकलिट हुन्। त्यो हो, ती प्रयोगकर्ताहरू जसले रातमा काम गर्न आवश्यक पर्दछ त्यो प्लस हुन्छ। टचप्याड ठूलो छ र यसमा इशाराहरू अनुमति दिन्छ।
ASUS ZenBook फ्लिप एस को भित्री को रूप मा, हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि तपाईं दुई सम्भावित प्रोसेसरहरू बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ: Intel Core i5वा Core i7। यी गर्न तपाईं थप्न सक्नुहुन्छ १ GB जीबी सम्मको र्याम मेमोरी। र, हुनसक्छ के तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै छक्क पार्नेछ: यसको भण्डारण एसएसडी ड्राइभहरूमा आधारित छ। र यसको क्षमता कुल १TB सम्म हुन सक्छ। सावधान रहनुहोस्, तपाईं २1 र 256१२ जीबी विकल्पहरूको माध्यमबाट जान सक्नुहुन्छ।
न त तपाईंले अडियो अनुभवको बारे बिर्सनु हुँदैन। Y प्रणाली जुन यस ASUS ZenBook फ्लिप एस एकीकृत गर्दछ Harman Kardon द्वारा प्रमाणित छ। योसँग एक डबल स्पिकर र एक बौद्धिक प्रवर्धन प्रणाली छ जसले तपाइँलाई प्रतिस्पर्धाको माथि आवाजमा स्तरहरू बढाउन अनुमति दिनेछ।
अतिरिक्तको रूपमा हामी तपाईंलाई यो कन्भर्टेबल बताउनेछौं, अल्ट्राकबुक R वा जे तपाई यसलाई कल गर्न चाहानुहुन्छ—, विन्डोज १० प्रोमा आधारित छ। यो पनि एक छ छेउमा फिंगरप्रिन्ट रिडर तपाइँको सत्र चाँडै र विश्वसनीयता अनलक गर्न सक्षम हुन। साथ साथै, यससँग धेरै वायरलेस र केबल जडानहरू छन् यस मोडेलको राम्रो काम बन्द गर्न। तपाईंसँग उच्च-गति र डुअल-च्यानल वाइफाइ, ब्लुटुथ कम खपत, र HDMI, USB ,.०, USB-C र इथरनेट पोर्ट हुनेछ।
अन्तमा तपाईंलाई बताउँछ कि ब्याट्री को यो ASUS ZenBook फ्लिप S ले ११..11,5 घण्टा सम्मको स्वायत्तता दिने वाचा गर्दछ एकल चार्जमा। थप रूपमा, यससँग द्रुत चार्ज छ जुन 60 minutes मिनेटमा %०% चार्ज प्राप्त गर्न अनुवाद गर्दछ। यसको मूल्य जब भाग 1.200 यूरो.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » कम्प्युटरहरू » ल्यापटपहरू » ASUS ZenBook फ्लिप एस, चरम पातलोपनको साथ एक परिवर्तनीय
किन USB-HUB ले मेरो डेस्कटप सुधार गर्न सक्दछ? [समीक्षा AUKEY]
स्विफ्ट,, स्पिन and र स्विच एसरको नयाँ कन्भर्टेबल अल्ट्रापोर्टेबल हुन्